UPrince uveza ukuthi wazizwa efika nje kumaProteas ukuthi uyiqaqa
August 3, 2021 Impempe.com
U-Ashwell Prince, ongomunye wabadlali abamnyama abadlale isikhathi eside eqenjini lesizwe lekhilikithi, amaProteas. Uthi namanje akukho okutheni osekushintshile kwikhilikithi yakuleli kusukela kudala kuza manje.
Ekhuluma kwiCricket South Africa’s Social Justice and Nation-Building Hearings, uPrince uthe kuyo yonke iminyaka eyisishiyagalolunye edlalela iqembu lesizwe wayezizwa engemukelekile neze.
Wayetshelwa ukuthi ukhona nje eqenjini ngoba engumdlali omnyama (okwenzelwe ukugcwalisa isikhala nje ngaye). Futhi ziningi izikhathi ecwaswa ngokwebala ezindlini zokushintshela.
“Ngo-2011 sasisekhimpini yezamasiko futhi babefuna izihloko esasizokhuluma ngazo. Babefuna ukuthi sivuleleke sikhulume iqiniso ngoba sasizoba yiqembu, ngakho kwakumele sikwazi ukuvulelana izifuba,” kusho uPrince.
“Omunye umdlali wathi: ‘singakhuluma ngomlando wezwe lethu? Izinto ezifana nobandlululo, iGroup Areas Act nokususwa ezindaweni ezithize ngendluzula?
“Singakwazi ukushona sigxile ekutheni lezi zinto zayithikameza kanjani impilo yethu nokuthi zaba namthelela muni kubazali bethu, nathi uqobo?’
“Yilokhu omunye wabadlali abamnyama ayefuna ukuthi kukhulunywe ngakho kodwa kwabuyiselwa eceleni ngokushesha.
“Impendulo yathi ‘Cha, ngeke sikhulume ngalokho. Asicabangi ukuthi lokho kumele kukhulunywe ngakho lapha’.
“Njengamanje abantu abafuni ukuzehlisa, baguqe ngedolo elilodwa (isibonakaliso sokulwa nokucwaswa kwabamnyama).
“Mahlawumbe ukuba sakhuluma ngalokhu ngo-2011, nokuthi ukube abantu babebona inhlupheko abantu abamnyama abadlule kuyona kuleli lizwe, ngabe kulula ukuguqa ngedolo.
Kodwake angithi asifuni ukukhuluma ngalokho,” kuchaza yena. UPrince ugcine ukudlalela amaProteas ngawo u-2011.
Uthe wayezizwa eyinhlwa nje kumaProteas esanda kufika eqenjini. “Kwakungekho ukwamukelwa ngumqeqeshi.
“Yayingekho into yokuthi asenze lo mdlali azizwe esekhaya. Kwakuyindawo lapho wawuzizwa khona unesizungu.
“Umuntu uyazi uma emukelekile futhi wazi kahle uma engemukelekile. Uyezwa ngisho egazini uma abantu bengakudingi endaweni noma bekudinga.
FUNDA NALA: UMusonda uthi ubuyele ukubhakuzisa inethi kuleli
“Wawukubona lokho uma kwenzeka kumdlali omusha osemncane omhlophe kodwa kungenzeki into efanayo kumdlali ongekho mhlophe,” kusho uPrince.
Ngaphezu kwakho konke lokhu uPrince wabekezela wadlala kumaProteas, ngoba wayefuna ukukhombisa ukuthi abantu abaphuma lapho ayephuma khona babekufanele ukudlala ikhilikithi ezingeni eliphezulu.
Previous Previous post: Ukubhakuzisa inethi, yilokho uMusonda akujoyinele iSwallows
Next Next post: UTembo isimume entanyeni eyokumataniswa kwabadlali bakhe neChiefs